के रस मूल्य निचोरेको छ? | Martech Zone
बिहीबार, जुलाई 30, 2009 आइतबार, अगस्त 23, 2009 क्रिस लुकास
यदि तपाईंले होराइजन रियल्टीको बारेमा सुन्नुभएको छैन भने गुगलमा द्रुत खोजी गर्नुहोस् र तपाईं केहि रोचक लेखहरू पाउनुहुनेछ, जस्तै यो पोष्टमा Mashable। द्रुत पृष्ठभूमि को लागी, उनीहरुका एक पूर्व किराएदार, अमांडा Bonnen, को बारे मा एक ट्वीट पठाउन मोल्डमा बस्दै तिनीहरूको एकाइमा। होराइजोन ए uit 50,000 को लागि मुद्दा Ms Bonnen को बिरूद्ध। अब थप तथ्यहरू प्रकाशमा आउँदैछन्, तर यहाँ सिक्नु पर्ने एक ठूलो पाठ हो र यो मात्र होइन कि सोशल मिडिया तपाईंलाई काट्न फिर्ता आउन सक्छ।
पाठ १: जान्नुहोस् कि कससँग शक्ति छ
जब तपाईं अनिश्चित भूमिमा डुब्नुहुन्छ, यो सोशल मिडिया, ब्लगर्स, वा पारम्परिक मिडिया हो, वास्तवमै कससँग शक्ति छ भनेर बुझ्न यो महत्त्वपूर्ण छ। आज पावर सिफ्ट स्पष्ट प्रस्ट छ तर सबैले पाउँदैनन्। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि लडाईहरू अगाडि बढ्न अघि, के तपाईं सोच्नुहुन्छ भन्ने लाग्नुहुन्छ कि, तपाईं घटनाहरू कसरी पक्का गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ। सम्भवतः तपाईको विचारको बाबजुद तपाईले सबै कार्डहरु समात्नु भएको छैन।
पाठ २: बन्दुकको झोलामा चक्कु नराख्नुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाइँ सोशल मिडिया समावेश गरेको एक शीर्षक बाहिर ल्याउन लाग्नु भएको छ भने, तपाइँ सामाजिक मिडिया बुझ्नुहुन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं माध्यम प्रयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ जुन तपाईंको फाईदाको लागि छलफल गरिएको छ। अन्यथा जब तपाईं त्यो चक्कु र तपाईंको विरोधीलाई तान्नुहुन्छ, वास्तविक वा हैन, बन्दुक खोल्छ तपाईं सिटिंग डक हुन लाग्नुभएको छ।
को रूप मा Mashable पोस्ट यति सजिलै यसलाई राख्छ:
हामी धेरै निश्चित छौं कि यो क्षितिज रियल्टीले यस ट्विटर ब्याकले $ 50,000 भन्दा धेरै हरायो। जब तपाईले उद्धरण गर्नुहुन्छ भनिन्छ तपाईलाई के लाग्छ? हामी पहिला मुद्दा हाल्ने गर्छौं, पछि कुनै प्रकारको संगठनको प्रश्न सोध्नुहोस्।?
पाठ:: उचित सल्लाह लिनुहोस्
म कुरा गरिरहेको छैन कानूनी सल्लाह। यो उमेरको दिनमा यो दिन अझ महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग कोही छ जसलाई सोध्न सकिन्छ, "मलाई के थाहा हुनुपर्दछ"। ठूला संगठनहरूका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग तपाईंको मार्केटिंग र PR टीम टेबलमा छ। साना संगठनहरूका लागि यो हुन सक्छaसामाजिक मिडिया परामर्शदाता, एक पार्टनर, वा केवल तपाइँको गर्मी इंटर्न। जो कोही हो, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले के हुन सक्दछ त्यसको लागि सही समझ प्राप्त गर्नुभयो, तपाईले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउनुपर्दछ, र सम्भावित परिणामहरू के हुन्।
सञ्चार परिवर्तन हुँदैछ। केहि वर्ष पहिले एउटा सानो स्थानीय कथा भएको हुन सक्छ आज राष्ट्रिय चारा बन्न सक्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग सार्वजनिक सम्बन्धको लडाईमा संलग्न हुनु अघि सडक कस्तो देखिन्छ भन्ने बारे पूर्ण ज्ञान छ।
यस शिफ्टको अर्को भर्खरको उदाहरण युनाइटेड एयरलाइन्सले आफ्नो महँगो टेलर गितार तोडे पछि संगीतकार डेभ क्यारोललाई उडायो। उसको भिडियो, "युनाइटेड ब्रेक्स गितारहरू" तुरुन्तै भाइरल भयो र - जबकि युनाइटेड मूल्यमा १$० डलरको गिरावट ओभरस्ट्रेटेड हुन सक्छ - निश्चितको लागि यूनाइटेड केहि ब्रान्ड इक्विटीको लागत।